Momba anay - Quanzhou Morton Machinery Co., Ltd.
Morton Machinery Company dia teknolojia avo lenta mifototra amin'ny famolavolana milina famoronana, serivisy sy ny orinasa mpamatsy ny orinasa sy ny indostrian'ny lamba sy ny lamba. Ny vokatra rehetra dia ankasitrahana tokoa amin'ny tsena samihafa isan-karazany eran'izao tontolo izao. Nanolotra milina tokana tokana izahay, milina Fleece, milina Jacquard, milina rib & milina malalaka saro-pantarina sy vokatra hafa mifandraika amin'ny fanohanana ara-teknika sy fananganana amin'ny oniversite any India, Turkey ary Vietnam mandritra ny taona maro. Izahay ihany no sinoa. ny fanamboarana izay nampiato ny fanamoriana tariby vita amin'ny boaty camameana izay tsara indrindra ho an'ny fitoniana milina sy mahitsy.
Orinasa Morton Machine noho ny traikefa sy fanoloran-tena ataon'ny mpiasa ao aminay. Manana ny halalin'ny traikefa izahay mba hanomezana fanohanana amin'ny toe-javatra saika tsy takatry ny saina, avy amin'ny fisafidianana akora, fampiofanana, rafitra solosaina ary fanamboarana masinina amin'ny tranokala ka hatramin'ny fanohanana ara-teknika sy serivisy.
Afaka manampy izahay hanatsara ny orinasanao.
Manohana ny fahombiazan'ny mpanjifantsika sy ny solontenany ny milina Morton amin'ny alàlan'ny fandefasana milina milina sy ny singa amin'ny fomba maika sy ara-potoana ary mitazona fifandraisana azo itokisana sy tsara amin'ny mpiara-miombona antoka tsirairay avy.
Consulting orinasa mikambana sy serivisy fananganana maimaimpoana. Ny famolavolana lamba vita amin'ny matihanina sy ny milina voafantina amin'ny habaka, ny milina feno machanical sy ny famolavolana rafitra.
Eo ambany serivisy fifanarahana
Ny fametrahana fanaraha-maso tsara kalitao, ny fanaterana fotoana ara-potoana, ny fandrindrana ny lozika fiarovana ary ny fanohanana ara-bola tsara.
Handray fatratra 100% ny hafanam-po hamahana sy handoavantsika ny tapitrisa tapitrisa misy hadisoana mety misy ara-potoana.
Ny ataonay rehetra dia ny hampihenana ny vidin'ny fividiananao sy ny fikojakojana anao, ary manome hery anao ny fifaninanana eo amin'ny tsena eo an-toerana. Ny serivisy feno Morton, dia hamonjy anao be dia be ny asa sy hitondra traikefa mahafaly.
Ny fiheverana amin'ny antsipirihany
Izahao toetra ny fitaovana rehetra ary araraoty ny fisavana.
Arakaraka an-tsakany sy an-davany avokoa ireo singa, ny mpitahiry ny tahiry dia mirakitra an-tsokosoko ny fitrandrahana sy ny tsy fahita.
Raiso an-tsoratra ny isaky ny dingana sy ny anaran'ny mpiasa, mety hahita olona tompon'andraikitra amin'ny dingana.
Fitsapana hentitra tsara alohan'ny fanaterana ny milina rehetra. Tatitra, sary sy horonan-tsary dia hatolotra ny mpanjifa.
Ekipa teknikan'ny matihanina sy nanabe fampianarana, ny fampiatoana tariby foana no teknika vaovao ataontsika, ny fanatanjahan-tena vita amin'ny haingo, ny hainganana hafanana avo.
Ny vanim-potoanan'ny fampandrehana dia 1 taona, ny politikam-panafihana dia halefa amin'ny mailaka misaraka.
Serivisy VIP ho anao
Tsy misy filaminana kely, tsy misy mpanjifa kely, ny mpanjifa rehetra dia VVVIP mpanjifa ho anay.
Tsy ny mpanjifa mividy ihany koa no manana orinasa mpivarotra. Morton dia hanolotra fanohanana feno ho an'ny fanitarana ny orinasanao.
Serivisy haingana: serivisy 24h amin'ny serivisy hamaly ireo fanontanianao tamin'ny fotoana voalohany.
Fanomezana sy safidy ho atolotra raha azo atao, rehefa mahazo ny fanontanianao.
Soso-kevitra momba ny matihanina: arakaraka ny fomba fiasanao, dia manolotra safidy mety tsara ho an'ny safidinao izahay, ary hifanaraka amin'ny famatsiana famokarana natao ho anao.
Fifandraisana tsara: ankizivavy mpivarotra ambaratonga ambony rehetra amin'ny teny anglisy.
Azo antoka fa raha miteny rosiana, frantsay na espaniola ianao, ny mpandika teny manokana dia manome anao ny serivisy akaiky indrindra.
Fanandramana eo amin'ny raharaham-barotra: Ny varotra rehetra manana traikefa fanondranana mihoatra ny 3 taona, efa zatra ny politikam-fanondranana sy ny fizotry ny fanafarana nasionaly, manampy anao hampandeha tsara ny fivoaran'ny mpanjifa sy ny fizarana fanafarana.
Manantena i Morton fa hiara-miasa aminao miaraka! Ny mpiara-miasa mpamatsy dia ho an'ny mpandraharaha tsara toa anao!